Kunzima koneHIV olaxazwe wumndeni | IOL Isolezwe
Kunzima koneHIV olaxazwe wumndeni
Isolezwe / 8 November 2012, 11:37am / SIMPHIWE NDWANDWE
UNKSZ Thoko Kubheka osiza uNksz Mathembi Sithole owalahlwa wumndeni wakhe waseHammarsdale
OWESIFAZANE waseHammarsdale ophila negciwane langculazi udonsa kanzima kulandela ukulaxazwa wumndeni wakhe ngoba sekuvele ukuthi uphila naleli gciwane.
UNksz Mathembi Sithole (25) useze wakhubazeka ngenxa yokugula okumxinile kwesifo sohlangothi njengoba manje esebhekene nokuhambe ehlala ngenxa yokulaxazwa ngabantu bakubo.
UNksz Sithole useze waqoqwa “nguMsamariya Olungileyo”, uNkk Thoko Gladys Kubheka (43), owamthatha wahlala naye kwakhe ngemuva kokumthola entuntanendishi endaweni, esehlukunyezwa yisoka ayekipite nalo.
Ngesikhathi Isolezwe lihambele kulo muzi izolo, lithole uNksz Sithole ehleli embethe ingubo kubonakala ukuthi uyafa ngamakhaza futhi nokugula kumxinile njengoba ubebuye akhwehlele agoqane aze azesule ngeduku ebusweni.
UNkk Kubheka uthe usewumthwalo wakhe nje manje ngoba wathi uma ebikela abomndeni wakhe okungu-anti wakhe nomalume bavele bamchitha bathi akabuyele esokeni lakhe abekipite nalo yonke le minyaka.
Owayeyisoka lakhe akucaci ukuthi uhlala kuphi kodwa ulinganiselwa eminyakeni engu-56.
UNkk Kubheka utshele Isolezwe ukuthi uShezi ubeke afike baxoxe naye aze amxoxele nokuthi bathandana noNksz Sithole esemncane esahamba isikole abantu bemthuka kodwa uthando lwabo lwaqina kakhulu.
Uthe akakaze akhiphe ngisho indibilishi yelobolo kodwa ugcine esekipite nayo intombazane egulayo manje.
Okunzima wukuthi uNksz Sithole akasakwazi nokukhuluma kodwa uyezwa ezindlebeni ngoba uma ebuzwa unqekuzisa ikhanda uma kufanele avume abuye alinikine uma ephika, kuphele kanjalo.
UNkk Kubheka uthe akasenandaba noma umndeni wakhe ungasamfuni kodwa sewakhuluma namakhansela wathola onke amaphepha amgunyaza ukuthi anakekele le ntombazane futhi ngisho imali yokukhubazeka isiyayihola ngenxa yakhe.
Uthe angakujabulela ukuthi umndeni okungenani ukhombise ukuyamukela intombazane ngoba ukholwa wukuthi ingalulama ngisho ekuguleni ngoba lokhu kulahlwa kwayo kuyihlule elisenhliziyweni kuyo.
Umndeni kaNksz Sithole wagcinwa uhlala eHammarsdale.
Ngesikhathi kuthintwa udadewabo omdala, uNkk Benzani “Smah” Ncibilika, uthe yena ayikho into angayenza ngoba uganile kanti ukuthatha udadewabo egula ayohlala naye emzini kungambangela utalatiya.
Uthe emndenini bayinhlakanhlaka.
Uthe umuntu owayehlala noNksz Sithole okungudadewabo kanina usathukuthele ngento ayenza ekipita “nekhehla esemncane” kodwa wathi basazoxoxisana ukuze babuyisane udadewabo abuyele ekhaya.